Ogaden News Agency (ONA) – Sawiradi Bandhigii Jaaliyada Ogaden Norwey ay soo bandhigtay “East African Festival Culture Norwey”
Sawiradi Bandhigii Jaaliyada Ogaden Norwey ay soo bandhigtay “East African Festival Culture Norwey”
Oslo: Barxadda weyn ee badhtamaha magaaladda Oslo (Grøndland), waxaa si aad u qurux badan, maanta oo sabti ah loogu qabtay bandhig-faneedka Geeska Africa, oo sanadkii mar la qabto.
Bandhig-faneedkan oo ahaa mid si weyn dadweynuhu uga soo qeyb galeen, ayna soo qaban-qaabiyeen Jaaliyadda S. Ogaadenya ee Norway iyo Ururka Dhalinta OYSU, ayaa waxa ku kulmay islamarkaana heeso wadani ah, dhaantooyin iyo ciyaar dhaqmeedyo kala duwan ku soo bandhigay bandhig-faneedka, Boqorka Dhaanta, Abwaan Jaango, Fanaanka codka dahabiga leh ee Abdi Baadil, fanaanadda qaranka Ogaadeenya, Nimco Jibaax iyo fanaanka da’da yar ee reer-Oslo, Mahad Jeesto.
Goobta bandhig-faneedku kasocday ayaa waxaa soo buux dhaafshay boqolaal dad isugu jira Soomaali iyo ajnabi ah, jecel hiddaha iyo dhaqanka S. Ogaadeenya, iyadoo goobta lagu soo bandhigay hiddaha iyo dhaqanka Ogaadeenya, oo si aan horey loo arag daawadayaasha u cajab geliyey sida asliga ah ee loo agaasimay bandhig-faneedkan.
Masraxa bandhig-faneedka G. Africa oo ay soo buux dhaafsheen dhalinyaro gabdho iyo wiilal isugu jira oo ku labbisnaa dharka hiddaha u ah ummada Ogaadeenya, ayaa geedo-wareegay masraxa, iyagoo muujinayey dhaqanka hodanka ah ee ay leeyihiin shacabka Ogaadeenya ee ku hoos jira gumeysatada tigreega. Karin Yrvin, oo ka tirsan xisbiga talada haya ee dalka Norway, kuna jirta Parlemenka dalka ayaa ballan qaaday inay gacan ka geysan doono sidii qadiyadda Ogaadeenya uga dhex shaqeyn lahayd Parlemenka Norway.
Sidoo kale, waxa hadalo ammaan iyo taageero macnawi ah meesha kasoo jeediyey, gudoomiyaha Jaaliyadda, Xaaji Abdullaahi, labada xildhibaan ee kujira Parlemenka deegaanka Oslo, Md. Baashe iyo Marwo Ubax oo sheegay siday ugu faraxsan yihiin inay ka hadlaan bandhig-faneedka sidan quruxda iyo kala dabeynta leh loo soo agaasimay.
Kasoo qeyb galayaasha bandhig-faneedka maanta ayaa ka kala yimid dhamaan goboladda Norway iyo wadamada Scandinavian-ka, waxaana si hagar la’aan habeen iyo maalin ah uga shaqeeyey inuu suurto-galo bandhig-faneedkan baaxaddan leh, maamulka iyo dhammaan xubnaha Jaaliyadda Norway, sida uu ONA u sheegay Madaxa Warfaafinta Jaaliyadda, Md. Abdiqadir Iltol, oo raacshay intaas in hadafka bandhig-faneedku inuu ahaa soo bandhigidda qadiyadda Ogaadeenya, iyadoo la adeegsanayo hab-faneed.